Global Voices teny Malagasy » Goiana : Minisitry Ny Fahasalamana Mivazavaza sy Miteny Amin’ny Mpiaro Ny Zon’ny Vehivavy Hoe ‘Tiany Hofelahana Ny Fitombenany’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Mey 2015 5:47 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Nancy
Sokajy: Karaiba, Goiana, Fahalalahàna miteny, Fahasalamàna, Fanoherana, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Manao tsia amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ireo mpiasa any Goiana : manamarika ny andro iraisam-pirenena 2014 nataon'ny Firenena Mikambana ho fanafoanana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ny fivondronan'ny mpiasa birao sy ny mpivarotra. Sary avy amin'ny Fikambanan'ny Mpiasan'ny Fitaterana Iraisam-pirenena. Nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-SA 2.0.
Nisy rakipeo  manelingelina ny saina nifanaovan'ny  vehivavy iray mafana fo sy ny Minisitry ny fahasalamana Goiane, niely nanerana ny haino aman-jery sosialy vao tamin'ny herinandro talohan'ny 20 Aprily teo, nampihaotra loha ireo mpisera amin'ny aterineto maro manoloana ny fihetsika asehon'ireo mpitantana ao amin'ny faritra amin'ny vehivavy sy ny fipetrak'ireo mpanao politika manoloana ny vahoaka nifidy azy ireo hanompo azy.
Nanao teny mahery tamin'ilay mpiaro ny zon'ny vehivavy, Sherlina Nageer,  izay nitsikera azy tamin'ny ezaka vitany, ny Dr. Bheri Ramsarran , mpikambana ao amin'ny Antokon'ny Vahoaka Progresista  izay antoko eo amin'ny fitondrana. Ambony loatra ny tahan'ny reny sy ny zaza maty amin'izao fitondrana izao raha ny fomba fijerin'ilay mpiaro ny zon'ny vehivavy. Nasain'i Ramsarran ‘nanakombona ny vavany’ izy, nataony hoe “adala” sy ‘ vongan-tay’. Avy eo nantsoin'ilay Minisitra ny mpitandro ny filaminana mba hanala an'i Nageer, ary mbola notohizany ny tabatabany tamin'ny filazany tamin'ny mpanao gazety fa ” tiany ho felahana ny fitombenany”[…] vazivazy ihany izany. — fandrahonana izay tsy nasian'ny ankamaroan'ny Goiane sira, indrindra eo amin'ny resaka hamaroan'ny herisetra ara-nofo  sy ny herisetra an-tokantrano  manjo ny vehivavy.  Vao haingana ireo vondronà vehivavy ireo no tena nampiaka-peo  momba io resaka io, ary fantatra tsara fa i Nageer no iray amin'ireo mpiaro sy mpisolo vava tena mavitrika ho an'ny zon'ny vehivavy.
Ity kaontin'ny  zava-mitranga momba ny vaovao ao amin'ny tranokalan'ny News Source ity dia nilaza fa na dia nanandrana ny nanala baraka an'i Nageer aza ny minisitra dia nijoro izy :
Mbola nanohy nanao fanamby taminy momba ny zava-boitany ihany izy ( Nageer), ary rehefa nampatsiahiviny azy fa ireo mpandoa hetra tahaka azy no mandoa ny karamany dia azo renesina i Ramsarran miteny ilay vehivavy hoe ‘ eff off’ tahaka ny niantsoany azy hoe ‘vongan-t%’ sy ny nitenenany fa tsy tokony nanapaka ny resaka manokana nifanaovany tamin'ireo mpanao gazety roa avy any Berbice teny amoron-dalana izy.
Mampihomehy fa teny ivelan'ny lapan'ny Fitsarana Whim ny minisitry ny Fahasalamana mba hanampy amin'ny fanohanana ny filoha teo aloha Bharrat Jagdeo izay miatrika fanenjehana noho ny heloka bevava manokana tamin'ilay kabary mampisara-bazana sy nampikorontana izay nataony tany Babu John tamin'ny volana Martsa. Nampangain'ny namany taloha sy ny vadiny taloha, Varshnie Singh, ho nanao herisetra an-tokantrano i Jagdeo. Nolaviny hatrany ireny fiampangana ireny.
Hitan'ilay lahatsoratra ho nahavariana ihany koa ny nanoloran'ny fitondrana ankehitriny vehivavy iray hirotsaka hofidiana ho Praiminisitra :
Nitaky ny hanajana bebe kokoa ny vehivavy Rtoa Elisabeth Harper ary nampanantena fa hanao ezaka bebe kokoa ny governemanta PPP vaovao hiadiana amin'ny herisetra ao an-tokatrano sy ho hentitra amin'ny fifehezana ny fanararaotana atao amin'ny vehivavy.
Tsy mandresy lahatra ny Code Red, izay manolotena mba hampisongadina ny olana momba ny vehivavy any Karaiba ny tanjona rehetra tratrarina hampivoarana ny resaka vehivavy; talanjona tamin'ny fihetsika izay mbola nataon'ny Minisitra ilay bilaogy na dia efa vaky aza ny resaka :
Nanao fanambarana an-gazety ny Minisitry ny Fahasalamana izay manamafy fa noho ny nanapahan'i Sherlina Nageer ny resadresaka tamin'ny mpanao gazety no nanery azy ho tonga amin'ny herisetra fankahalana vehivavy tahàka iny. Azo henoina i Sherlina mitaky ny fandraisan'andraikitry ny fanjakana noho ny haavon'ny tahan'ny fahafatesan'ny reny any Goiana, izay ny avo indrindra amin'ny Karaiba miteny Anglisy.
Nohizingizinin'ny minisitra tamin'ny adihevitra mafana nifanaovany tamin'i Nageer fa ” vitsy kokoa ny zaza amam-behivavy maty noho ny tamin'ny andron'ny PNC [People's National Congress , ilay antoko politika iray matanjaka any Goiana ]”. Notsikerain'ny Code Red ny fiarovan-tenan'ny minisitra :
Teny ‘mandranitra’ no napoitran'ny Minisitra mba hanamarinany ny herisetra nataony. Ny fanaovana ” fandranitàna” dia ampiasaina matetika hanamarinana sy hanaporofoana ny herisetra mahery vaika ataon'ny lehilahy amin'ny vehivavy. Tafasisika hatrany amin'ny fitondrana sy ireo valintenin'ny mafana fo momba ny herisetra io fitenenana io. Ny fiteny mahery, tahaka ny teny manala baraka sy teny mampihorohoro navantan'ilay Minisitra tamin'i Sherlina dia teny fankahalana vehivavy.
Nolazain'ny Code Red ireo tranga maron'ny  fanitsakitsahana zon'ny vehivavy manerana ny faritra, tamin'ny fitakiana ny ” mpitondra fanjakana mba hamaky bantsilana ireo herisetra na aiza na aiza misy izany” sy ” ireo mpanao politika manerana ny faritra [mba hahatsapa] fa mahalaza betsaka amin'ny andraikiny amin'ny firotsahany amin'ny resaka maha-lahy na maha-vavy sy ny zon'ny vehivavy ny fahanginan-dry zareo amin'ireo fandikàn-dalàna ataony amin'ny mponina ireo.”:
Vehivavy ny 51%-n'ny mponina ary tsy maintsy manao tatitra amintsika ny governemantatsika.
Tsy tokony hihorohoro amin'ny fahanginana isika satria midika fahafatesana ny fahanginana. Ara-bakiteny.
Nanomboka nanao fangatahana amin'ny aterineto  ho firaisankina amin'i Sherlina Nageer sy ireo rehetra mpiaro ny zon'ny vehivavy ilay bilaogy.
Niteny  ny momba ilay zava-niseho ihany i Nageer ny farany, ary nolazainy fa ” tsy mbola voaozona tahaka izany izy” ary nasongadiny ireo tranga maro amin'ny tsy fahombiazan'ny Ministeran'ny Fahasalamana amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka :
Tena talanjona aho. Ny nandramako natao dia ny hahazo valinteny tamin'izay heveriko ho resaka ara-drariny avy aminà mpiasam-panjakana iray, ao amin'ny biraom-panjakana. Fotoam-pifidianana izao ary amporisihina isika vahoakan'i Goiana mba hiara-miasa amin'ireo mpanao politika, mba hametra-panontaniana, ary hizara ny hevitsika sy ny fijerintsika miaraka amin-dry zareo. Toy ny hoe tsy azo atao amim-pahamendrehana izany aty Goiana ary ireo izay manaiky ny zava-misy amin'izao fotoana izao ihany no azo ekena. Marina fa ao anatin'ny trangan-javatra mampalahelo isika rehefa mahatsapa ireo filoha teo aloha, sy ireo minisitra ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary ireo misahana andraikitra ambony fa azony atao ny manao kabary tsara lahatra feno fankahalàna, ny mamporisika ny fankahalana isam-baravarana, ny manozona sy ny manararaotra ireo mpiray tanindrazana, toy izay ny fiaraha-miasa amim-pahatoniana, amim-pandinihina ary amim-panajana miaraka amin-dry zareo.[…] Mendrika ny tsara kokoa isika amin'ny maha-vahoaka antsika.
Tsy raharahan'ny olona ny fiarovantenan'ilay Minisitra izay nilazàny fa nanenina tamin'ny fihetsiny izy (izay nohamafisiny fa noranitina izy). Niaraka niseho ny hetsi-panoherana  tao amin'ny aterineto sy ny teny an-kianja ho fanohanana an'i Sherlina Nageer.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/05/22/69620/
 Sherlina Nageer,: https://www.linkedin.com/pub/sherlina-nageer/5/252/30b
 Dr. Bheri Ramsarran: http://parliament.gov.gy/about-parliament/parliamentarian/bheri-ramsarran/
 Antokon'ny Vahoaka Progresista: http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Progressive_Party_%28Guyana%29
 herisetra ara-nofo: https://globalvoicesonline.org/2014/12/16/does-the-caribbean-have-a-rape-culture/
 herisetra an-tokantrano: https://globalvoicesonline.org/2012/11/27/protests-put-an-end-to-chris-browns-guyana-gig/
 Code Red, : https://redforgender.wordpress.com/2015/04/22/caribbean-feminist-activists-face-threats-intimidation-misogynist-bullying/
 nanery : http://newssourcegy.com/news/slap-and-strip-bheri-offers-apology-for-harsh-words/
 People's National Congress: http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_National_Congress
 tranga maron'ny: http://www.stabroeknews.com/2014/features/in-the-diaspora/03/24/will-take-sitting/
 nanao fangatahana amin'ny aterineto: https://secure.avaaz.org/en/petition/All_Caribbean_people_Solidarity_with_Sherlina_Nageer_all_womens_human_rights_defenders/?nwaXmfb